को हुन् कांग्रेसकी कान्छी सभापति स्वस्तिका ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत वडा अधिवेशनहरु सुरु भइरहेका छन् । कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो, पुस्तान्तरणको विषय । अर्थात्, अब युवा पुस्ताले कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सबैले बताउन थालेका छन् ।
यहीबीच दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं ३ को वडा सभापतिमा स्वस्तिका महत निर्वाचित भएकी छिन् ।
१९ वर्षकी स्वस्तिका सम्भवतः यो अधिवेशनमा निर्वाचित हुने कांग्रेसकै सबैभन्दा कान्छी वडा सभापति हुन् ।
विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय रहेकी स्वस्तिकाको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक नै देखिन्छ । उनका बुबा पार्टीको जिल्ला उपसभापति समेत भएका थिए ।
दुई वर्षअघि निधन भएका स्व. भुपेन्द्रजंग बस्नेतकी छोरी हुन्, स्वस्तिका ।
स्वस्तिका वडा सभापति बनेपछि सामाजिक सन्जालमा उनको विषयमा निकै धेरै चर्चा चलेको छ । नेपालगन्ज टेक्निकल कलेजबाट हेल्थ असिस्टेन्टको अध्ययन पूरा गरेकी स्वस्तिका अब आफूले राजनीतिक यात्रालाई नै अगाडि बढाउने सुरसारमा छिन् ।
प्रकाशित मिति : भदौ २०, २०७८ आइतबार २:५२:३८,